TuLotero dia mandefa ny fampiharana vaovao andrasana efa ela ao amin'ny Google Play | Vaovao momba ny gadget
TuLotero dia mandefa ny fampiharana vaovao andrasana efa ela ao amin'ny Google Play
Miguel Hernandez | 02/06/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 31/05/2021 11:37 | fampiharana
TuLotero dia nametraka ny toerany hatramin'ny nahaterahany ny taona 2014 ho mpamatsy loteria an-tserasera sy mahasarika any Espaina, ka na ny orinasa lehibe aza dia nivadika tamin'ny endrika nomerika an'ny TuLotero na dia ny Loteria Noely izay saika fombam-pivavahana isan-taona aza.
Ny fampiharana TuLotero vaovao dia natomboka tao amin'ny Google Play Store hanomezana anay traikefa feno hahafahanao mitantana ny loteria tsy mbola nisy toy izany. Ny zava-baovao dia nasongadina haingana noho ny endriny mahafinaritra, manome traikefa tanteraka sy manokana izay hitantanana ny loteria iray manontolo.
1 Rindrambaiko havaozina andrasan'ny mpampiasa
2 Tombontsoa amin'ny fampiharana TuLotero
3 Milalaova ao amin'ny TuLotero ary mahazoa € 1 MAIMAIMPOANA
Rindrambaiko havaozina andrasan'ny mpampiasa
Ny fampiharana TuLotero dia azo alaina ao amin'ny Google Play Store ho an'ny fitaovana Android, izay manolo ny kinovan'ny Lite an'ny TuLotero amin'ny farany izay mandraka ankehitriny dia misy ary voafetra ny fahaiza-manao. Ny fangatahana ao amin'ny kininy Lite dia namela ny mitahiry ny tapakila fotsiny sy mahita ny valiny, ilaina amin'ny fampidinana ny .APK avy amin'ny tranokala TuLotero.
Sintomy ny TuLotero ao amin'ny Google Play
Raha manana iPhone ianao dia azo jerena ao amin'ny App Store ihany koa.
ankehitriny, mampifanaraka ny politika Google vaovao, TuLotero dia nohavaozina mba hanolotra kinova feno an'ny fampiharana izay azonao sintonina maimaim-poana, tsy avy amin'ny Google Play Store ihany, fa misy ihany koa ao amin'ny iOS App Store sy ao amin'ny Huawei App Gallery.
Tamin'ny nanombohany, Ny fampiharana TuLotero dia nahavita niditra an-tsokosoko tamin'ny laharana faha-6 amin'ny laharana fampiharana eran-tany sy tao amin'ny Top 2 fialamboly tao amin'ny Google Play Store, miaraka amin'ny fanekena avo lenta avy amin'ireo mpampiasa izay manome salan'isa 4,8 kintana amin'ny 5 azo atao avy amin'ny rafitra fanombatombanana Google, zavatra manaporofo ny fahombiazana tsara sy ny fampidirana tsara ny interface an'ny mpampiasa izay manolotra an'i TuLotero.
Amin'izany fomba izany, amin'ny fampidirana tanteraka ao amin'ny Google Play Store sy ny sisa amin'ireo magazay fampiharana malaza eran-tany, ianao dia ho afaka handray fanavaozana tsy tapaka ary hitazona ny fampiharana hatrany amin'ny kinova farany, Ity dia ho fiarovana lehibe indrindra, izay no antony, avy eo amin'ny Actualidad Gadget dia manentana anao izahay faingana mba hampidina ny TuLotero avy amin'ny magazay fampiharana tianao hahafahanao manararaotra amin'ny fahaiza-manao izay atolotry ity fampidirana vaovao ity ho an'ireo mpampiasa TuLotero
Tombontsoa amin'ny fampiharana TuLotero
Ny rindranasa dia mbola kinova iraisan'ny fahaizan'ny ny tranonkala TuLotero fa tafiditra tanteraka amin'ny felatananao. Izany no antony hahafahanao milalao miaraka amin'ny findainao sy amin'ny solosainao, izay mety aminao amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izay, Afaka manararaotra ianao fa maimaim-poana tanteraka ilay rindranasa, tsy misy komisiona ary ny fampandrenesana fanosehana dia hahafahanao hahafantatra ny valin'ny filalaovana nataonao teo no ho eo. Raha manankarena amin'ny TuLotero ianao dia ho fantatrao alohan'ny olon-kafa, tsy heverinao ho tombony ve izany?
Ny fampiasana TuLotero dia hahafahanao mizara ny tapakila amin'ireo namanao voasoratra anarana amin'ny tsindry iray ihany, mitovy amin'ny tsy ho very ny tapakilanao, Tsy mila manafina izany tapakila fandresena sarobidy izany ianao, ho ampy ny miditra ao amin'ny TuLotero satria nifandray tamin'ny telefaona finday ny tapakila.
Toy ny mahazatra dia afaka manohy mividy ny tapakilao ianao, mandray anjara amin'ny vondrona sy klioba haingana, mamorona vondrona hatramin'ny olona 100 hiara-milalao, ary mandanjalanja ny fifandanjana ao amin'ity vondrona ity. Ankoatr'izay, azo antoka 100% i TuLotero, nanomboka tamin'izay ny filokana dia arahin'n'ny fitondrana ofisialin'ny tambajotram-panjakana Lottery sy Betting, noho izany ny tapakilanao dia mitovy amin'ireo novidina tamin'ny taratasy.
Amin'izany fomba izany, azonao atao ny mandoa ny tapakilan'ny tapakila tsy misy kaomisiona ary mivantana eo amin'ny kaontinao any amin'ny banky, noho izany dia azo antoka ny tsy mitonona anarana, fepetra fiarovana hafa tokony horaisina. Maherin'ny 500 ny Lotera Espaniola fitantanana efa mifandray amin'ny TuLotero ary hamela anao hilalao ny isa tianao amin'ny fisoratana anarana ho azy ireo, ary koa ny fanirahana ny fitantanana ny Lotera Noely toy ny efa ataon'ny orinasa lehibe.
Milalaova ao amin'ny TuLotero ary mahazoa € 1 MAIMAIMPOANA
Raha misoratra anarana amin'ny fampiharana TuLotero ianao ary manararaotra miditra "Newsgadget" Ao anaty boaty "Manana kaody aho" ny fisoratana anarana amin'ny fangatahana, Hanana € 1 afaka mandany vola amin'ny karazana loteria tadiavinao ianao satria ampidirina mivantana amin'ny kaontinao izany an'ny mpampiasa. Aza adino ny mampiditra ny kaodinao ary manararaotra an'io fotoana tsy manam-paharoa hilalao maimaimpoana io ary hahafantatra lalindalina ny zavatra niainana niaraka tamin'i TuLotero.
Ankoatr'izay, ny alakamisy 4 jona 2021 ho avy izao dia misy Big Jackpot Super Friday vaovao miaraka amin'ny 130 tapitrisa euro amin'ny loka voalohany. Tany TuLotero dia efa nomen'izy ireo ny loka voalohany tamin'io andro manokana io tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa avy amin'ny iray amin'ireo fitantanan-draharaha miisa 500 mifandraika amin'ny TuLotero, indrindra ny Administration 29 an'ny Valladolid.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » TuLotero dia mandefa ny fampiharana vaovao andrasana efa ela ao amin'ny Google Play
Huawei Watch 3 sy FreeBuds 4, miloka amin'ny faran'ny akanjo avo lenta
Anker PowerConf C300, webcam mahomby ary valiny matihanina